Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ICosta Rica Iindaba eziDlayo » ICosta Rica ngoku ifuna ubungqina bogonyo lwe-COVID-19
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ICosta Rica Iindaba eziDlayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Zonke iindawo zorhwebo eCosta Rica ziya kufuna ubungqina bogonyo lwe-COVID-19 kumzamo wokukhusela abemi belizwe kunye neendwendwe, ukuqala nge-8 kaJanuwari ka-2022.
Bonke abatyeleli, kungakhathaliseki ubudala kunye nesimo sokugonywa, kufuneka bagcwalise i-electronic epidemiological HEALTH PASS form, ubuncinane kwiiyure ezingama-72 phambi kohambo lwabo.
Abo batofwayo kufuneka baqhoboshele “iKhadi labo leRekhodi yoGonyo lwe-COVID-19” kwifom kwaye baya kufumana ikhowudi ye-QR ethile abanokuthi bayisebenzise ukungena kumaziko orhwebo elizweni.
Ukusukela nge-1 kaDisemba 2021 ukuya nge-7 kaJanuwari 2022, kuya kubakho ixesha lotshintsho apho amaziko orhwebo anokwamkela abantu ngaphandle kweeshedyuli ezipheleleyo zogonyo, ngaphandle kokuba basebenza kuma-50%.
Ukuqala ngoJan. 8, 2022, zonke iindawo zorhwebo kwi icosta Rica iya kufuna ubungqina bogonyo lwe-COVID-19 kwinzame zokukhusela abemi belizwe kunye neendwendwe. Ubungqina bogonyo kufuneka buqinisekiswe ngekhowudi ye-QR okanye “iKhadi leRekhodi yoGonyo lwe-COVID-19,” kwaye buya kusebenza kubo bonke abantu abaneminyaka eli-12 nangaphezulu. Amaziko orhwebo aquka iihotele neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide, iindawo zokutyela kunye neebhari, iinkonzo zokhenketho lokukhenketha, iikhasino, iivenkile, iimyuziyam, iindawo zokwenza umthambo, kunye nezikolo zobugcisa nomdaniso. Iinkonzo ezibalulekileyo, ezifana neevenkile zegrosari kunye neekhemesti, aziyi kufuna ubungqina bogonyo lwe-COVID-19.
Ukusukela nge-1 kaDisemba 2021 ukuya nge-7 kaJanuwari 2022, kuya kubakho ixesha lotshintsho apho amaziko orhwebo anokwamkela abantu ngaphandle kweeshedyuli ezipheleleyo zogonyo, ngaphandle kokuba basebenza kuma-50%. Amaziko akhetha ukusebenza nge-100% umthamo kufuneka afune ubungqina bogonyo lwe-COVID-19.
icosta RicaIimfuno zokungena zihlala zinje:
Bonke abatyeleli, kungakhathaliseki ubudala kunye nesimo sokugonywa, kufuneka bagcwalise i-electronic epidemiological HEALTH PASS form ubuncinane kwiiyure ezingama-72 phambi kohambo lwabo. Abo batofelwayo kufuneka baqhoboshele “iKhadi labo leRekhodi yoGonyo lwe-COVID-19” kwifom kwaye baya kufumana ikhowudi ye-QR ethile abanokuthi bayisebenzise ukungena kumaziko orhwebo elizweni.
Iindwendwe ezigonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19 kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala banokungena kweli lizwe ngaphandle kwepolisi ye-inshurensi yokuhamba de kube nguJan. 7, 2022. Ukususela ngoJan. abangaphantsi kweminyaka eli-8. Abo bangagonywanga ngokupheleleyo kufuneka bathenge ipolisi ye-inshurensi yokuhamba yasekhaya okanye yamazwe ngamazwe ebandakanya i-COVID-12 kunye neendleko zokuvalelwa, ukuba kuyimfuneko.